မန်းကိုကို ~ Mahn Ko Ko: Critical Thinking မိတ်ဆက် (၁)
Critical Thinking မိတ်ဆက် (၁)
တွေးတောဆင်ခြင်မှုကင်းသော သင်ယူခြင်းသည် အချည်းနှီးတည်း ။
(ကွန်ဖြူးရှပ်ရဲ့ စကားပါ ။ မှန်မမှန်ဆိုတာကိုတော့ တွေးတောဆင်ခြင်ကြဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ် ။)
၁၉၈၀ လွန်ခုနှစ်တွေကစပြီး critical thinking ဆိုတဲ့ စကားစုဟာ ရေပန်းစားလာခဲ့ပါတယ် ။
ခုချိန်ခါမှာတော့ တစ်ဆင့်တက်ပြီး တက္ကသိုလ် ကောလိပ်အချို့မှာ ပညာသင်ကာလတစ်လျှောက်လုံး
အတွက် အခြေခံအုတ်မြစ်အဖြစ် ဘာသာရပ်တစ်ခုအနေနဲ့ ဖွဲ့စည်းသင်ကြားပေးနေကြပါပြီ ။ အသက်
မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရပ်တစ်ခုလို သီးခြားရပ်တည်ဖို့ မဟုတ်ပေမယ့် ပညာသင်ရာမှာရော နေ့စဉ်ကြုံ
တွေ့နေကြရတဲ့ ဘဝရဲ့အစိတ်အပိုင်းတိုင်းမှာပါ အကောင်းဆုံး ဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်မှုတွေ လုပ်နိုင်အောင်
ကရိယာတစ်ခုလို အသုံးပြုနိုင်ကြဖို့ သင်ကြားပေးတာဖြစ်ပါတယ် ။ လူတိုင်းအတွက် ရှိရင်းဘဝနဲ့အနေ
အထားထက် ပိုမြင့်မားတဲ့အခြေအနေတစ်ရပ် ဒါမှမဟုတ် ရနိုင်သမျှ ဘဝအခွင့်အရေးတွေရဲ့ အကောင်း
ဆုံးကို ရွေးချယ်ရယူနိုင်အောင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာမှာ အကူအညီပေးနိုင်တာမို့ ဒီစာစုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေး
ပထမဆုံး critical ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမြင်လိုက်ရလို့ အရာတိုင်းမှာ ဆန့်ကျင်ကန့်လန့်လုပ်ဖို့နဲ့ အပြစ်
ရှာဖို့လို့ ထင်သူတွေလည်း ရှိနိုင်ပါတယ် ။ ဒီတော့ ဝေဖန်တာ၊ မေးခွန်းထုတ်တာ၊ ထောက်ပြတာတွေကို
ခံနိုင်ရည်နည်းပါးကြတဲ့ မြန်မာပြည်သူပြည်သား အတော်များများအတွက်တော့ စိတ်ထဲထင့်သွားနိုင်ပါ
တယ် ။ ဒါပေမယ့် critical ဟာ “ဆန်းစစ်ဝေဖန်သော၊ အကဲဖြတ်သော၊ နှိုင်းချိန် သော” လို့လည်း
အဓိပ္ပါယ်ယူလို့ ရတာကြောင့် critical thinking ဆိုတာကို “ဆန်းစစ်ဝေဖန် တွေးခေါ်ခြင်း” သို့မဟုတ်
ဥာဏ်နဲ့ယှဉ်တဲ့တွေးခေါ်မှုလို့ ယူဆရင်လည်းရပါတယ် ။
ပိုပြီးအတိအကျ အဓိပ္ပါယ်ဖေါ်ရရင် critical thinking ဆိုတာဟာ -
- ဆွေးနွေးငြင်းခုံချက်တွေနဲ့ အမှန်တရားရယ်လို့ အဆိုပြုတာတွေကို ထိထိရောက်ရောက် ခွဲခြား
ဖေါ်ထုတ် ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာပြီး တန်ဖိုးဖြတ်ဖို့
- အခြေမြစ်မရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအစွဲအလမ်းနဲ့ ဘက်လိုက်မှုတွေကို တွေ့ရှိဖေါ်ထုတ် ကျော်လွှားဖို့
- အဆုံးသတ်ကောက်ချက်တွေကို ခိုင်မာယုံကြည်လောက်တဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ ထောက်
- ဒါ့ပြင် ဘာကိုယုံကြည်ပြီး လုပ်ကိုင်ရမယ်ဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ လက်တွေ့ကျမျှတတဲ့ ပညာ
သားပါတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလုပ်ဖို့ - စတဲ့ အမျိုးမျိုးကျယ်ပြန်တဲ့ သိမြင်ကျွမ်းကျင်မှုတွေနဲ့ အ
သိဥာဏ်စရိုက်တွေအပေါ် ယေဘုယျအားဖြင့်ခေါ်ဝေါ်တဲ့ စကားရပ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒါတွေကိုကြည့်ရင် critical thinking ဆိုတာဟာ ကျယ်ပြန့်ပြီး ခဏတာလေးနဲ့ ရလာတတ်တဲ့အရာ
မျိုး၊ ရလာဒ်မျိုးမဟုတ်ဖူးဆိုတာ သိနိုင်ကြမှာပါ ။ ဒီစာစုဟာ စာဖတ်သူကို မိတ်ဆက်အဆင့်ပဲ ဝေဌပေး
နိုင်မှာဖြစ်ပြီး ဘဝအတွေ့ အကြုံတွေနဲ့ယှဉ်ပြီး သတိရှိရှိနဲ့ မြင်အောင်ကြည့် အသုံးချသွားနိုင်တာနဲ့အမျှ
တိုးတက်မြင့်မားတဲ့အဆင့်ကို တက်လှမ်းလာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဆက်မသွားခင် critical thinking နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အရည်အသွေးတွေကို စာရင်းလုပ်ဖေါ်ပြချင်ပါ
တယ် ။ အဲဒါတွေကတော့ လူတစ်ယောက်ဟာ -
(၁) ဘယ်သတင်းအချက်အလက်တွေဟာ (ကိုယ်ဦးတည်တဲ့ အရာတစ်ခုအတွက်) အကျုံးဝင်တယ်
မဝင်ဖူးဆိုတာ စိစစ်ဆုံးဖြတ်နိုင်တာ ၊
(၂) ယုတ္တိတန်တဲ့ အဆိုပြုချက်နဲ့ စိတ်ခံစားမှုအပေါ်မူတည်တဲ့ အဆိုပြုချက်တွေကြား ခွဲခြားတတ်တာ ၊
(၃) ဖြစ်ရပ်မှန်နဲ့ ထင်မြင်ချက်ကို ခွဲခြားနိုင်တာ ၊
(၄) အထောက်အထားတွေရဲ့ အကန့်အသတ်နဲ့ အလျော့အတင်းရှိနိုင်ပုံ နည်းလမ်းတွေကို မှတ်မိသိ
(၅) အခြားသူရဲ့ ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုတွေက လှည့်စားချက်နဲ့ လစ်ဟာကွာဟချက်တွေကို ရိပ်မိရှာတွေ့
(၆) အချက်အလက်နဲ့ သတင်းသုတတွေကို ကိုယ့်ဘာသာ ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာတင်ပြနိုင်တာ ၊
(၇) ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုတွေက ကျိုးကြောင်းမဆီလျော်တဲ့ အပြစ်အနာအဆာတွေကို သိမြင်တာ ၊
(၈) မတူကွဲပြားတဲ့ အရင်းအမြစ်တွေက အချက်အလက်နဲ့ သတင်းသုတများရဲ့ ဆက်နွယ်ချိတ်ဆက်နေ
တာတွေကို ဆွဲထုတ်နိုင်တာ ၊
(၉) ရှေ့နောက်မညီတဲ့ မလုံလောက်တဲ့ ဒါမှမဟုတ် ဒွိဟဖြစ်နေတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေအပေါ်
(၁၀) ထင်မြင်ချက်ထက် အချက်အလက်အပေါ်အခြေခံပြီး ခိုင်လုံတဲ့ဆွေးနွေးငြင်းခုံချက်တွေကို တည်
(၁၁) အခိုင်မာဆုံး ထောက်ပင့်ပေးတဲ့ အချက်အလက်အစုအစုံကို ရွေးချယ်တာ ၊
(၁၂) ပုံကြီးချဲ့ထားတဲ့ အဆုံးသတ်ကောက်ချက်တွေကို ရှောင်ရှားတာ ၊
(၁၃) သက်သေအထောက်အထားတွေထဲမှာ လိုအပ်ချက်တွေကိုခွဲခြားဖေါ်ထုတ်ပြီး နောက်ထပ်အချက်
အလက်တွေကို စုဆောင်းနိုင်ဖို့ အကြံပေးတာ ၊
(၁၄) ပြဿနာတစ်ခုအတွက် ရှင်းလင်းတဲ့အဖြေ ဒါမှမဟုတ် အဖြေတစ်ခုထဲ ရှိမနေနိုင်တာတွေကို သိ
(၁၅) အခြားရွေးချယ်နိုင်စရာလမ်းတွေကို အဆိုပြုတင်ပြပြီး အဲဒါတွေကိုလည်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာမှာ
(၁၆) ဆောင်ရွက်မှုလမ်းကြောင်းတစ်ခုကို အကြံပြုတင်ပြရာမှာ သက်ရောက်ပတ်သက်နေကြတဲ့ လူစုံ
အဖွဲ့စုံ ဘက်စုံကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားတာ ၊
(၁၇) ဆွေးနွေးငြင်းခုံတဲ့အကြောင်းအရာ ၊ အဲဒါနဲ့ ဆက်စပ်ပတ်သက်တဲ့ အခြေအနေတွေကို ရှင်းရှင်း
လင်းလင်း ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုတာ ၊
(၁၈) ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုတစ်ခုကို ခုခံကာကွယ်ဘို့ သက်သေသာဓကတွေကို မှန်မှန်ကန်ကန်တိတိကျ
ကျ အသုံးပြုတာ ၊
(၁၉) ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုကို ကျိုးကြောင်းဆီလျှော်အောင် စုစုစည်းစည်းစီစဉ်တာ ၊
(၂၀) ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုတစ်ခုရဲ့ တိုးတက်ဖြစ်ပေါ်မှုမှာ တိုက်ရိုက်မသက်ဆိုင်တဲ့ အရာတွေကို ရှောင်
(၂၁) အကိုးအကား အထောက်အထားတွေကို ယုံကြည်လက်ခံလာအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ ဆွေးနွေး
ငြင်းခုံမှုအဖြစ် ပံ့ပိုးပေးတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံမျိုးနဲ့ တင်ပြတာတွေကို ဘယ်လောက်ကောင်းအောင်လုပ်နိုင်
သလဲတို့ ဖြစ်ကြပါတယ် ။
ဒါတွေအားလုံး ပြည့်စုံဖို့ကတော့ မဖြစ်နိုင်သလောက်ပါပဲ ။ ဒါပေမယ့် တစ်ချက်ချင်းစီရဲ့ အရည်
အသွေးတွေ တိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ ကိုယ်စီဘဝရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတိုင်းကို အကျိုးပြုလာမှာဖြစ်သလို
အခြားသူတွေထက် ပိုသာတဲ့အနေအထားတစ်ခုကို တည်ဆောက်လာနိုင်ကြတာ တွေ့လာရမှာပါ ။
လွယ်တဲ့အလုပ်တွေ မဟုတ်ပေမယ့် ခက်လှတယ်တော့လည်း မဟုတ်ပြန်ပါဘူး ။ ဘယ်သူမှ မွေးက
တည်းက တတ်လာကြတာမဟုတ်လို့ အတူဆက်ပြီး လေ့လာသွားကြရအောင်လို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါ
Critical Thinking မိတ်ဆက် (၂)
၁၂၊ ၀၂၊ ၂၀၁၁
- Bassham G, Irwin W, Nardone H & Wallace J 2008, Critical Thinking:astudent’s introduction, 3rd edn, McGraw-Hill Higher Education, New York.
- Moore B & Parker R 2009, Critical Thinking, 9th edn, McGraw-Hill Higher Education, New York.
- ဖီလော်ဆိုဖီခေါင်းစဉ်ကြီးအောက်မှာ လောဂျစ်၊ လောဂျစ်ခေါင်းစဉ်ခွဲအောက်မှာမှ Critical Thinking ဆိုပြီး ပြန်ခွဲထွက်တဲ့
ဘာသာရပ်ငယ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ် ၊
- စာအုပ်ပေါင်း အများကြီးရှိတဲ့အနက်က ကိုယ်ပိုင်ဝယ်ထားဖြစ်တဲ့ စာအုပ်နှစ်အုပ်အပေါ် အခြေခံရေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ၊
အခါအားလျှော်စွာတော့ အခြားစာအုပ်တွေကလည်း ထည့်သွင်းအသုံးပြုသွားနိုင်ပါတယ် ၊
- ကိုယ်တိုင်ဖတ်ရင်း ရေးသွားမှာမို့ (အတိုချုပ်နဲ့တင်) အပိုင်း ၁၀ ပိုင်းမကရှိနိုင်တဲ့ စာတွဲဖြစ်ပါတယ် ၊
- တစ်ပိုင်းနဲ့တစ်ပိုင်း အချိန်ခြားနိုင်ပါတယ် ၊
- ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေကို ကြိုဆိုပါတယ် ။
Posted by မန်းကိုကို at 2/12/2011
htoosay February 15, 2011 at 10:56 PM
A good start. Well written!
မန်းကိုကို February 16, 2011 at 1:55 AM
At last, there are someone who will praise me for my effort!
Kyaw Htin February 16, 2011 at 1:28 PM
This stuff of topic is usually nothing to be controversial but to contemplate oneself with the facts written. So,you wouldn't get much comments but this doesn't necessarily mean your effort is not widely acknowledged.
I should say this isamust-read. Please keep going.
မန်းကိုကို February 17, 2011 at 4:43 PM
ဝင်အားပေးသွားတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုကျော်ထင် ၊
လူဆိုတာလည်း အခက်သားဗျ ၊ မျှော်လင့်ချက်မထားပဲ လှူတန်းဝေဌတယ်ဆိုပေမယ့် ချီးမြှောက်မှုတွေရှိရင် ကြည်နူးရသလို ဝေဖန်မှုတွေရှိပြန်ရင်လည်း ကျောက်သွေးသလို အရောင်တက်အောင် လုပ်ပေးသလိုဖြစ်လေတော့ ဒါတွေကို မျှော်လင့်တယ်လို့ မပြောနိုင်ရင်တောင် မင်္ဂလာရှိတဲ့ အပိုဆောင်းဆုတွေမို့ အဲ .. ဘယ်လိုနာမည် တပ်ရမှန်း မပြောတတ်တော့ပါဘူး ။
တဆက်ထဲမှာလည်း အပေါ်ကကျနော့်ပို့စ်ဟာ ပျင်းရိပျင်းတွဲကြီးလို့ ဖြစ်နေတယ်လို့ ခံစားမိတာကြောင့် ပို့စ် ၁ -၂ - ၃ အမှတ်စဉ်တွေကြားမှာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး နမူနာနဲ့ တွေးစရာလေးတွေကို ပို့စ်တိုလေးတွေအနေနဲ့ ကြားညှပ်ထည့်ရင် ကောင်းမလားလို့ စဉ်းစားနေပါတယ် ။
ဆရာပြောတဲ့ controversial ဖြစ်မယ့် topic ကတော့ နောက်ပို့စ်မှာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ် ။ ရှိပြီးသားတွေကိုပဲ ပြန်စုပြီး တင်ပြထားတာဖြစ်ပေမယ့် မြန်မာအသိုင်းအဝိုင်းတွေကြားမှာ လက်ရှောင်ကြတဲ့ topic လေးတစ်ခုလို ဖြစ်နေတာကြောင့် အချို့လူတွေအတွက် စိတ်မထားတတ်ရင် မခံမရပ်ချင်အနေအထားမျိုးကို တွန်းပို့ပေးသလိုတော့ သက်ရောက်သွားနိုင်ပါတယ် ။
မန်းကိုကို March 8, 2011 at 12:45 PM
critical thinking အကြောင်း လာဖတ်ဖြစ်ကြတဲ့သူတွေအတွက် ဝမ်းသာတယ်ဗျာ ။
ဖြစ်နိုင်ရင် လိုအပ်ချက်လေးတွေကို ထောက်ပြသွားနိုင်ကြရင် ကောင်းမှာပဲ ... :-)
ထားပါတော့ ၊ စာနဲ့ပတ်သက်လို့ မဆွေးနွေးချင်ရင်တောင် ပို့စ်အပေါ်မှာပါတဲ့ ပုံကိုကြည့်ပြီး ဘာတွေများတွေ့ကြမလဲ ပြောပြကြပါလားဗျာ ...
မန်းကိုကို March 12, 2011 at 2:20 AM
အပေါ်ကပုံ (၃) ကွက်မှာ အလယ်ပုံကို ကြည့်လိုက်ပါ ။
ပင်နယံလည်တဲ့လမ်းကြောင်းပြထားတာတွေက သဘာဝမကျပဲ မှားနေပါတယ် ။
အကယ်၍ ပင်နယံ (၃) ခုဟာ သုံးပွင့်ဆိုင်ထိနေကြတယ်ဆိုရင်တော့ ပိုဆိုးပါလိမ့်မယ် ၊ ပင်နယံလည်ဖို့ လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူး ။
ကျနော်လည်း သတိထားမိတာ သိပ်မကြာသေးဖူး ။
i got your post today, very good post for me, and very useful for my current situation, very useful, very helpful, "perfect analysis for cause to effect" is basic thinking of Buddha, called WIBIZZA.
မန်းကိုကို October 26, 2011 at 11:28 PM
အသုံးဝင် အကူညီရတယ်ဆိုလို့ ဝမ်းသာပါတယ် ။
Anonymous ပြောပုံအတိုင်းနဲ့တော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ရွှေပုံကြီးပေါ်ထိုင်ပြီး အသုံးမချနိုင် ဖြစ်နေကြရ တာပေါ့ ။ ဒါတွေကို ဆက်စပ်တင်ပြဖို့ တတ်နိုင်သူတွေ အားထုတ်ပေး ကြရင်တော့ အချို့ လူတွေအတွက် အကျိုးများမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ် ။
စကားစမြည် ~ အွန်လိုင်းပေါ်က ခြေချော်သမျှ
စကားစမြည် ~ ဟိုဟိုသည်သည်
စကားစမြည် ~ ဟိုရောက်သည်ရောက်
စကားစမြည် - ထောက်မယ် လှမ်းမယ်
ပင်လုံနဲ့ယှဉ်တဲ့ အလွတ်သဘော အဖြေရှာချက်တချို့ (၅)
ပင်လုံနဲ့ယှဉ်တဲ့ အလွတ်သဘော အဖြေရှာချက်တချို့ (၄)
ပင်လုံနဲ့ယှဉ်တဲ့ အလွတ်သဘော အဖြေရှာချက်တချို့ (၃)
ပင်လုံနဲ့ယှဉ်တဲ့ အလွတ်သဘော အဖြေရှာချက်တချို့ (၂)
ပင်လုံနဲ့ယှဉ်တဲ့ အလွတ်သဘော အဖြေရှာချက်တချို့ (၁)
ဆွေမျိုး ဆာမိနဲ့ အမီနာတို့ဆီမှာ